३० प्रतिशत ‘लङ टर्म इन्भेष्ट’ गरी ५० प्रतिशत रकमको कारोबार गर्छु
नवराज सुवेदी, अगुवा लगानीकर्ता काठमाडौं, साउन २९
विद्यार्थी जीवनदेखि नै सेयर बजारमा छिरेका नवराज सुवेदी अहिले लगानी मात्रै गर्दैनन्, धेरैलाई आफ्नो अनुभवका आधारमा आवश्यक ज्ञान र सुझाव पनि दिने गर्छन्। विद्यार्थी जीवनमा पहिलो पटक माछापुच्छ्रे बैंकको सेयर किनेर बजारमा लागेका उनले अहिले विभिन्न कम्पनीहरुको लाखौंको पोर्टफोलियो बनाएका छन्। प्रस्तुत छः नेपाल सेयर हव प्रालिका डाइरेक्टर समेत रहेका सुवेदीसँग गरिएको वार्तालापको संक्षिप्त अंशः
सेयर बजारमा कहिलेदेखि, कसरी छिर्नुभयो ?
म म्यानेजमेन्टको विद्यार्थी, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मास्टर पढ्दै गर्दा म सेयर बजारमा छिरेको हुँ। यो भनेको ५ वर्षभन्दा धेरै भइसक्यो। त्यतिबेला कारोबारमा धेरै समस्या र चुनौतिहरु थिए। खरिद भइसकेपछि प्रमाणपत्र नै आउँथ्यो, त्यसका लागि पनि २ महिना समय लाथ्यो। हराउने, च्यातिने जस्ता समस्या थिए। अहिलेजस्तो खातामा जम्मा हुने सिस्टम थिएन। माछापुच्छ्रे बैंकको सेयर किनेर म बजार छिरेँ।
मास्टर पढ्दै गर्दा मैले अध्यापन पनि गराउँथे, आएको तलवबाट केही रकम जोगाएर मैले सेयरमै लगाउँथेँ। पछि प्राविधिक रुपमा बजारको विकास हुँदै गयो। यसप्रति रुची बढ्दै गयो, कम्पनीहरुको वित्तीय स्थितिहरु केलाउँदै गए। विभिन्न सफ्टवेयरबाट पनि कम्पनीहरुको इतिहासदेखिकै विविध कुराहरुमा खेल्दै गएँ। अहिले हामी ग्रुपमा बसेर अध्ययन र छलफल गरेर खरिदबिक्री गर्छौँ।
कुन कुन बेला के रणनीतिमा सेयर किन्ने बेच्ने गर्नुहुन्छ ?
प्राविधिक र आधारभूत (टेक्निकल एण्ड फण्डामेन्टल) विश्लेषण गरी, ग्रुपमा छलफल गरेर उपयुक्त लागेका बेला किनबेच गर्छौँ। हामीले सूचीकृत कम्पनीहरुमध्ये तिनका समूहलाई केलाएर खरिदबिक्री गर्ने हो। बिमा समूह घटेका बेला राम्रा कम्पनीहरु छानेर त्यता लगानी गर्छौँ भने होटल वा बैंकिङ समूह पनि त्यसैगरी छान्छौँ।
एउटा समूह बढिरह्यो भने अर्को समूहको पनि पालो आउँछ। हामीले पहिले समूह निर्धारण गर्छौँ। जस्तो बैंकिङ समूहको लाभांश घोषणा अलि चाँडो हुन्छ भने बिमाको ढिलो। त्यसकारण चैत वैशाखमा बैंकिङ समूहको सेयर किनेर अलि पछि बिमा समूहलाई प्राथमिकता दिन सकिने भयो। अरु समूहहरु पनि त्यस्तै हो।
तर यो महिना नै किन्ने वा बेच्ने भन्ने पनि हुँदैन। उपयुक्त लागेका बेला कारोबार गरिरहन्छौँ। हामीले पहिले नै कम्पनीहरुले दिन सक्ने लाभांश केलाउँछौँ, लगानी गर्छौँ र बजार बढेका बेला बेच्छौँ पनि। बजार बढेका बेला पनि लगानीकर्ताले फाइदा लिन सक्छन् र घटेका बेला पनि राम्रो मौका लिन सक्छन्।
प्राविधिक रुपमा कम्पनीहरुको अध्ययन गर्न विभिन्न सफ्टवेयरहरु छन्। ति सफट्वेयरबाट कम्पनीहरुको वर्षौदेखिको मूल्य ट्रेन्ड हेर्न सकिन्छ। वित्तीय स्थिति हेर्दा कुन कुन आधारमा कुन कुन कम्पनी उपयुक्त छन् भन्ने कुरा केलाउन सकिन्छ। वातावरण कस्तो बन्दैछ भन्ने कुरालाई पनि केलाउँछौँ, लगानीकर्ताको मनोवललाई पनि अनुमान गर्छौँ र त्यहीअनुरुप रणनीति बनाएर ग्रुपमा छलफल गरेर कारोबार गर्दछु।
मैले कारोबार गर्दा आफूसँग भएको रकममध्ये ३० प्रतिशत ‘लङ टर्म इन्भेष्ट’ गर्छु। धेरै प्रतिफल दिने, मार्केट भ्यालु ग्रोइङ हुने खालका कम्पनीहरु लामो अवधिको लगानीका लागि छान्दछु। ५० प्रतिशत रकमको मैले ‘सर्ट टर्म’ कारोबार गरिरहन्छु। बाँकी २० प्रतिशत मसँग नगद हुन्छ। किनकि लामो अवधिसम्म बजारबाट फाइदा लिन नसकिएको स्थिति आउँदा त्यो नगद मैले आफ्नो खर्चका लागि परिचालन गर्छु, बजार अत्याधिक घटे त्यो पनि लगाउँछु।
तपाईहरु आधारभूत प्राविधिक पक्ष केलाउन दक्ष हुनेहरु त ग्रुपमा छलफल गरेर मिलेर किन्नुहुँदो रहेछ, साधारण व्यक्तिलाई त निकै चुनौति पो रहेछ त ?
लगानी गर्नुअघि सामान्य रुपमा कम्पनीहरुको आधारभूत पक्षहरु त जो कोहीले केलाउनै पर्छ। आधारभूत तथा प्राविधिक रुपमा सिकाउनका लागि धेरै संस्थाहरु पनि खुलेका छन्। हामीले यसअघि विभिन्न म्यानेजमेन्टका कलेजहरुमा गई निशुल्क सेमिनारहरु पनि गर्यौँ। कोर्ष नै लिन चाहनेलाई हाम्रो कम्पनीले पनि सिकाउने गर्दछ।
मैले व्यक्तिगत रुपमा पनि तपाईहरुलाई चाहिएका बेला २÷३ घण्टाको निशुल्क ‘लेक्चर’ दिन्छु। इच्छुक जोकोहीले मेरो कार्यालय आएर केही घण्टालाई निशुल्क रुपमा आवश्यक जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। मेरो उद्देश्य भनेको धेरैलाई यसबारे सिकाउने र पुँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि सम्वद्ध निकायहरुलाई दवाव दिनु नै हो। हाम्रो पुँजी बजार अझै पनि निकै पछाडि छ, यसको विकास गर्न जरुरी छ।
बजार विकासका लागि के के गर्नुपर्ने जरुरी ठान्नुहुन्छ ?
नियामक निकायहरु धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले धेरै कामहरु गर्न बाँकी छ। ति कामहरु हुन सके बजारको विकास र विस्तारमा सहज हुने थियो। अनलाइन ट्रेडिङबाट कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ। त्यसो भएमा जुनसुकै ठाउँमा भएका लगानीकर्ताले मोबाइलकै भरमा सेयर खरिदबिक्री गर्न पाउँछन्। ब्रोकरमार्फत मार्जिन लेण्डिङ गराउनु जरुरी छ।
त्यो हुँदा सेयर किन्ने लगानीकर्ताले सेयर मूल्याङ्कनको केही हिस्सा ब्रोकरबाट सापटी लिएर किन्न पाउने छन्। त्यस्तै गैह्र आवासीय नेपालीले पनि प्रत्येक्ष रुपमा लगानी गर्ने वातावरण हुनुपर्यो। अहिले सेयरको आपूर्ति बढेको छ। त्यसका लागि मार्केट डिलर हुनुपर्यो। अक्सन मार्केट व्यवस्थित गर्नुपर्यो। पुँजी बजारमैत्री वातावरण बनाउन सबैले पहल गर्नुपर्छ।
लगानीकर्ता संघ गठन गर्दा महासचिव हुनुभयो, अहिले राजीनामा दिनुभयो, के कुरा मिलेन ?
लगानीकर्ताको हित संरक्षणका लागि भनेर संघ खोलिएको थियो। तर संघमा रहेका केही पदाधिकारीहरुले नै नाजायज फाइदा लिने प्रयास गरे। नियामकलाई झकझक्याएर बजारको विकास र विस्तारका लागि टेवा पुर्याउने हाम्रो उद्देश्य हो।
इन्साइडर ट्रेडिङलाई निरुत्साहित गर्ने लगायतका उद्देश्य लिएर खोलिएको संघमा सकेसम्म आ–आफै फाइदा लिने प्रयास भएपछि मैले राजीनामा दिएको हुँ।
लगानीकर्ताको हितका लागि अब हामीले छुट्टै संगठित संस्था बनाउने तयारी गरेका छौँ। ५० वटै ब्रोकर कम्पनीमा सक्रिय रहेका कम्तीमा ५–५ जनाको दरले २५० केन्द्रिय सदस्य रहनेगरी लगानीकर्ताको सशक्त संगठन बनाएर पुँजी बजारको विकासका लागि अघि बढ्ने हाम्रो तयारी छ।
बजार कता जाला जस्तो देख्नुहुन्छ ?
केही करेक्सन हुने अवस्था देख्छु। बजारलाई प्रभाव पार्ने अन्य पक्षहरु पनि यहाँ केलानुपर्दछ। जस्तो अझै पनि ब्याजदर घट्न सकेको अवस्था छैन। त्यस्तै लगानीमैत्री वातावरण बन्न सकेको पनि छैन। अनलाइन ट्रेडिङ भइसकेपछि अवश्य पनि बजार बढ्छ। तर यसका लागि पनि केही महिना त अझै लाग्ला।
प्रकाशित मिति: आईतबार, साउन २९, २०७४, ०४:१६:४६